Wadida soo noqnoqda doorsoome ee jaban ee matoorka 3 waji ee qiimaha iibka
Wadida soo noqnoqda variable ee 3 wejiga matoor iib ah
Ka hel heshiisyada ugu wanaagsan ee waditaanka Xawaaraha Labedelka ah.
Wadayaasha AC | Dareewalada inta jeer ee kala duwan | VFD | rogroge
Xawaaraha isbedbeddelka ah (VSDs), oo sidoo kale loo yaqaanno xawaaraha la hagaajin karo (ASDs), waa aalado kala duwanaan kara xawaaraha matoorka xawaaraha caadiga ah. Xawaaraha la hagaajin karo (ASD), oo sidoo kale loo yaqaano variable-speed drive (VSD), wuxuu qeexayaa qalabka loo isticmaalo in lagu xakameeyo xawaaraha mishiinka. Nidaamyo badan oo warshadeed sida khadadka isu-ururinta waa inay ku shaqeeyaan xawaare kala duwan alaabooyin kala duwan. Wadida soo noqnoqda ee doorsoome (VFD) waa nooc ka mid ah kontoroolka mootada ee ku kaxaysa matoor koronto isagoo kala duwanaya soo noqnoqda iyo danabka sahayda korantada. Matoobyadani waxay isticmaalaan kontaroolayaasha kombuyuutarka, oo sidoo kale loo yaqaano Variable Frequency Drives ama VFD's
Dareewalada Joogtada ah ee Kala Duwan - Xakamaynta Xawaaraha Mootooyinka-Bilow jilicsan ama wadwado-soo noqnoqonaya
Codsiyada ay lagama maarmaan u yihiin xawaaraha doorsoomayaasha, sida caadiga ah matoor AC ah oo leh beddelaad ama matoorada burushka ayaa loo isticmaalaa.
Waxaan leenahay kooxdayada cilmi-baarista iyo horumarinta, oo ay ku jiraan injineero sare oo khibrad leh, iyo injineero da'yar oo leh hal-abuurnimo iyo fikir firfircoon. Alaabtayadu waa labadaba hal-abuurnimo iyo waara.
Xawaaraha la hagaajin karo wuxuu ka koobnaan karaa matoor koronto iyo kontorool loo isticmaalo in lagu hagaajiyo xawaaraha hawlgalka matoorka.
Qaar badan oo ka mid ah darawallada isbeddelka soo noqnoqda ee qadiimka ah ayaa lagu kala soocay nooca wareegga rogaha ee loo adeegsaday VFD. Xawaaraha-xawaaraha doorsoome ee ABB wuxuu xakameeyaa xawaaraha matoorada korontadu si ay ula mid noqoto hawsha gacanta lagu hayo, keydinta awoodda iyo hagaajinta waxqabadka.
Codsiyada Wadista Soo noqnoqota ee Isbeddelka ah ee Nidaamyada HVAC, wadeyaasha soo noqnoqda ee isbedbedelka ah ee dummies, wareegyada wadista soo noqnoqda ee bedbeddela, kaas oo xakameynaya awoodda, labadaba danab iyo inta jeer.
20 Hp Vfd Qiimaha
VFD | rogroge
7.5kw vfd qiimaha
Soo noqnoqoshada isbedbedelka ah ee Wajiga Keliya
vfd ee 2hp 3 wejiga matoor
5 Sababood Oo Aad Nagu Dooran Karto
1.Waxaan bixinaa tayo sare leh, alaab qiimo jaban.
2.Our adeegga macaamiisha waa online maalinta oo dhan iyo adeegga iibka ka dib waa mid feejigan.
3.Waxaan leenahay cilmi-baaris noo gaar ah iyo kooxda R & D oo aan nahay hal abuur leh.
4.Our alaabta waxaa lagu iibiyaa gudaha iyo dibadda waana la aamini karaa.
5.We are warshad leh sanado badan oo waayo-aragnimo wax soo saarka, iyo sanado badan oo waayo-aragnimo wax soo saarka yihiin oo kaliya in ay ku siiyaan a tayada xawaaraha isbedel duwan.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno!
Soo Gudbi Qoraalkaaga